Dabagal lagu sameeynayo faragelin uu Imaaraadku ka wado dalal ay Somalia ka mid tahay! (Yaa ku dheggan?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dabagal lagu sameeynayo faragelin uu Imaaraadku ka wado dalal ay Somalia ka...
Dabagal lagu sameeynayo faragelin uu Imaaraadku ka wado dalal ay Somalia ka mid tahay! (Yaa ku dheggan?)
(Washington, DC) 11 Maajo 2019 – Madaxa Guddiga Xiriirka Dibedda ee Aqalka Wakiilladda ee Maraykanka, Eliot Engel ayaa shaaca ka qadaay doorka Dowladda Imaaraadka ee dagaalladda ka socda saddexdaasi dal inay tahay fal xadgudb ku ah Qawaaniinta Caalamiga ee ka hortagga hubka loo qeybiyo qeybaha ku lug leh colaadaha iyo Faragelinta Tooska.
Wararka Reer Galbeedka ayaa sheegayo Mowqifka Maraykanka ee arrintaasi timid, kadib, markii ay DFS ka heleen cabasho sii kordhayso oo ku aadan Tallaabadda ay Imaaraadka Carabta uga dhisanayso Saldhig Milliteri magaalladda Berbera ee W/Galbeed ee dalka Somalia.
Goobjoogayaasha waxay kaloo xaqiijiyeen in Qalabka Milliteri ee ay Imaaraadka u gudbinayso Saldhigga Berbera tahay mid ay ka digayaan Guddiga Caalamiga ee Cunaqabataynta saaran Somalia.
Hadalka Madaxa Guddiga Xiriirka Dibedda ee Aqalka Wakiilladda ee Maraykanka Eliot Engel waxa uu soo baxay 2 maalin kadib, markii ay Baarayaal ka socday QM baaritaano ku sameeyeen doorka ay Imaaraadka Carabta ku leeyihiin dagaalladda ka socda dalka Liibiya iyo Duqeymihii ay Ciiddanka Khaliifa Xaftar ku qaadeen Xarumaha Dhexe ee Dowladda Liibiya ee ay QM taageerto.
Baarayaasha QM waxay soo ogaadeen in Gantaalladda dhulak laga gano ee ay Kooxda Khaliifa Xaftar u adeegsadeen duqeymahaasi ahaayeen Gantalladda nooca Blue Arrow oo ay Imaaraadka lahaayeen iyo kuwo kale oo lagu farsameeyey dalalka Shiinaha iyo Kazakhistan.
Sidoo kale, Dowladda Maraykanka waxay si dhow indhaha ugu hayaan doorka Imaaraadka ee Arrimaha dalka Sudan iyo Natiijadda ka soo baxda Casuumaad ay Dowladda Imaaraadka u fidisay wakiilo ka kala socda 5 Dhaqdhaqaaqyo hubeysan oo ka dhisan Sudan, kuwaasi oo dhawaan booqasho ku tegay magaalladda Dubai ee Imaaraadka.
Wargeyska New York ayaa qoray in qorshaha Imaaraadka yahay sidii ay Kooxahaasi hubeysan uga biiri lahaayeen Dowladda Suudaan ee ay Golaha Milliteriga hoggaamiyaan, iyadoo ay Xooggaga Rayidka doonayaan in la gaaro Heshiis talada lagu wareejinayo Dowlad Rayid ah.
Faragelinta Imaaraadka ee saddexdaasi waddan ee Carbeed, kama haystaan Dowladda Maraykanka wax taageero Milliteri, mana haystaan wax Sharciyad Caalami ah, hadday noqon lahayd Urur Caalami ah ama mod ka mid ah Urur-gobaleedyadda.
Xigasho: Idaacadda Dalsan
Previous articleCash or competition? What is behind England’s domination of Europe?
Next articleDuullimaadyadii saaka ka tegey Somalia oo lagu saxariirinayo garoonka Wajeer + Sawirro (Doorkii DF?)